जुकरबर्ग किन गए चीन ? फुकुवा होला त चीनमा फेसबुक ? - Naya Pusta
Naya Pusta २०७४ कार्तिक १३ गते प्रकाशित
एकवर्ष पश्चात फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पुनः चीन भ्रमणमा पुगेका छन् । जुकरबर्गले बेइजिङको सिंघुआ स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरुसँग भेटघाट गरेको तस्वीर फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन्।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट बजार चीनमा प्रवेश गर्ने सम्भावित अवसरको खोजी गर्दै जुकरबर्ग चीन भ्रमणमा गएको बताइएको छ। हाल चीनमा प्रतिबन्धित रहेको फेसबुकले सन् २०१८ देखि चीनमा फुकुवा हुने अवसरको खोजी गरिरहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
चीन ठूलो र आकर्षक बजार रहेतापनि फेसबुकका लागि चीनमा प्रवेश सजिलो छैन । चीनले अनलाइन सेन्सरसीपको उल्लंघन गरेको भन्दै हालै फेसबुक मातहतको ह्वाट्सएपलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ।
पीडित चेलीको बेदना, बलात्कृत भएपछि आत्महत्या गर्न खोजें तर, छोरीका लागि बाँचेकी छु
‘सेक्स’ का लागि अनलाइनबाटै महिलाको बिक्री
राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको आपतकालिन बैठक बस्दै